Hordhac: Real Madrid vs Girona - Los Blancos Oo U Socota Inay Ka Aargudato Kooxdan Ka Dhisan Catalonia %
Difaacadayaasha horyaalka La Liga, ee wadanka Spain, ayaa waxay marti qaadi doonan caweysnimada caawa oo Axad ah dhigooda Girona, si ay kula ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka labaad ee aduunka ugu xiisaha badan.
Girona ayaa waxaa la xasuustaa inay Los Blancos ay dhagaha kusoo dhufatay kulankii koowaad ee sanad ciyaareedkan markaasoo ay gurigooda lagu dheelayay, waxaana markaasoo Boroqada La Liga lagu soo lagday 2-1.
Markaan waxay soo booqan doonan caasimada wadanka Spain ee Madrid, waana markii ugu horeyso oo kooxdaan gobolka Catalonia ka dhisan ay ku dheesho garoonka Cad-Cadka, waxaana laga dhowrayaa waxa ay ku sameyso mar kale, Madrid.
Real Madrid, ayaa waxaa tababarka dib ugu soo laabtay ciyaartoyda kala ah: Gareth Bale iyo Luka Modric kadib dhibaatooyin maalmihii lasoo dhaafay lasoo darysay, laakiin lama xaqiijin karo inay dheeli doonan ama hadii ay kusoo bilaaban karaan shaxda koowaad.
Sidoo kale, Zidane ayaa wuxuu kulankaan helayaa dhamaan ciyaartoydiisa oo dhan, mana laacib uu tabayo, isagoona umuuqda mid ku Jahwareeri doona kala xulashada laacibiinta uu dookha koowaad ka dhigi doono ciyaartaan.
BBC – [Bale, Benzema iyo Cristiano Ronaldo] ayay rajeynayaa taageerayaasha Madrid inuu Zidane kusoo bilaabi doona kulanka, maadaama ciyaarihii ugu dambeeyay oo ay wada dheeleen ciyaartaan ay bandhig fiican sameeyeen.
Dhanka kale, naadiga Girona ayaa haysata saf ciyaareed dhameystiran, waxaana macalinkeeda 18-ka ciyaaryahan ee uu soo magacowday kasoo dhex-muuqday laacibiintii garaacday Madrid kulankii mar sii horeysay oo fasal ciyaareedkan ah dhacay.
Waxay badan tahay in tababaraha Girona, ninka lagu magacaabo Pablo Machín uu garoonka kula soo shir tegi doono ciyaaryahanadii dar-dartay Real Madrid kulankii koowaad, waxaana kamid ah: Anthony Lozano iyo Portu oo goolkii Madrid lagu xaaqay dhaliyay.
REAL MADRID: Navas|Carvajal – Varane – Ramos – Marcelo, Kroos – Casemiro – Modric, Bale – Benzema – Ronaldo
GIRONA: Bounou|Ramalho – Espinosa – Juanpe, Pablo Maffeo – Pons – Granell – Mojica, Portu – Stauni – Borja Garcia
Kulanka: Real Madrid vs Girona
La LigaReal Madrid vs Girona